2 years ago 1063 Qoodi
Pirezidaantiin Ameerikaa Donaald Tiraamp jibba sanyummaafi loogii lammilee Afriikaa Chaayinaa jiranirratti raawwatamaniif Dhaabbanni Fayyaa Addunyaa (WHO)n deebii cimaa kennuu dhiisuu isaatiif qeeqan.
Lammiileen Afriikaa magaalaa Gungzhuu, Chaayinaa keessatti argaman weerara Covid-19n wal qabatee loogiin sanyummaatiin dhiibbaan irra gahuu gabaafamee ture.
Pirezedaant Tiraamp Dhaabbata Fayyaa Addnyuutaatiin 'jala-deemtuu' Chaayinaa jechuun deeggarsa maallaqaa biyyi isaa dhaabbatichaaf taasistu akka dhaabu akeekkachiisuun isaa ni yaadatama.
Kana malees, Tiraamp irra deedeebiin Chaayinaan weerara Covid-19 ittisuuf sochii gahaa hintaasifne jechuun wayita himatan ni dhagahamu.
Akka biyyoonni addunyaa weerara kana dura dhaabbachuuf dursanii hin qophoofneefis odeeffannoo wayitawaafi sirrii kennaa hin turre jechuun Chaayinaa balaaleffata Pirezedaantichi.
Komii Tiraamp Chaayinaa irratti kaasan kana keessattis ammooo gaheen WHO ni jira.
Akka Tiraamp jedhutti Chaayinaan weerara koronaavaayirasii bakkuma irraa ka'e sanatti to'achuu dandeessi ture. Garuu WHOn ammoo kana irratti Chaayinaa qeequu dhiisee guddisee jajaa ture jedha.
Yeroo darbee lammiilee Afriikaa Chaayinaatti sabbaba weerara koronaavaayirasiitiif dirqamaan akka adda baafamuun turan, bakka jiraatan akka gadhiisaiifi tajaajilawwan akka hinargannee taasifamuunsaanii gabaafameera.
Tiraampis xalayaa dursaa Dhaabbata Fayyaa Addunyaa, Dr Teedroos Adihaanoomiif barreessaniin, dhaabbatichi gochawwan loogiifi jibba sanyummaa Chaayiinaa irratti raawwatameef yaada hinkenniine jechuun himateera.
Qabiyyeen xalayaa Tiraamp kunis dhimma lammiilee Afriikaa Chaayinaa Guwaangzuu keessatti wallakkeessa Eblaatti akka dirqamaan koronaavaayirasiitiif qorataman taasifame kan ilaalaltuudha.
Viidiyoon lammiileen Afriikaa dirqamaan mana jireenyaafi hoteelota keessaa ari’ataman wayita daandiirra ciisan mullisu tokkos gadhiifamee ture.
Namoonni viidiyoo sanarratti dubbataa turan akka himaniittis, dirqiidhaan akka qorataman taasifamaa turan.
Tibba sanattis aanga’oonni Guwaangzuu himannaa jibbinsa sanyii jedhame haalanii ture.
Haata’u malee, Tiraamp akka jedhuutti Dhaabbanni Fayyaa Addunyaa ‘gochawwan jibba sanyummaa kana cimsee balaalleeffachuu qaba ture.’’
WHO COVID19 Ameerikaa Chaayinaa
Qorannoo Ameerikaa: 'Maddi vaayirasii koronaa laboraatoorii Chaayinaa keessaa ta’uu malaa'
Oct. 7, 2020, 7:27 a.m.
"Xumura bara Faranjootaa 2020tti talaalliin dhibee Covid-19 qophii ta’uu danda’a" – WHO